school ground मा student हरु खेलीरहेक छन्। एउटा studentले भाग भाग आयो आयो भनेको सुनिन्छ। अनि तेहा उभिएर गफमा मस्त teacher मध्ये एकले त्यो studentलाइ बोलाउछ।
student दौडेर आयो।
teacher:10 times up down
student 10 times up down गर्छ
teacher: don't speak nepali, now go
अनि फर्केर अरु teacherहरु सङ्ग भन्छ
जति भनेपनि तेर्दैन यिनिहरुले भन्दै गफिन थाल्छन्.........
rule सबैले अनुशरण गर्नु पर्ने होइन र। यो सत्य कुरा हो मैले मेरो घर पछाडी को schoolमा देखेको। अनि मलाइ पनि झोक चल्यो र मैले पनि भन्दिए सुन्ने गरेर- नेपाली बोल्यो भनेर punishment दिने teacher ले आफु पनि नेपालीमा कुरा गर्नु भएन नि। सुनेर लाज लागेछ कि क्या हो त्यो teacher लुखुर लुखुर office तिर गयो।
Posted by wordflows at 7:59 PM
Basanta July 7, 2009 at 10:35 PM
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) July 7, 2009 at 11:40 PM
हाह हाहा .... मुखमा बूजो हाल्दिनु भएछ .... प्राय: सबै तीर को हालत त्यस्तै छ |
Sujan Sharma July 8, 2009 at 3:04 AM
ठिक गर्नुभयो तपाँईले !!
हावा The Wind July 8, 2009 at 4:50 AM
बिचरा बोर्डइङ स्कुल को मास्टर जस्ले पनि उसैलाई गाली गर्छ
जबकी त्यो जस्तो गाह्रो र अपजसी काम अरु केही छैन
सिकारु July 8, 2009 at 8:18 AM
haa. logic answer .
Ashish Lohorung Rai July 9, 2009 at 4:43 AM
good treatment to him..
राजेश बुढाथोकी July 9, 2009 at 5:29 AM
तपाइको यो झटारो टाँसो खुबै घत लाग्यो मलाई ।
टाँसोको लागि धन्यवाद
Milan July 9, 2009 at 10:45 PM
ani tyo saano bachcha laai das das patak uthbas garn lagaaune tyo teacher laai tyo kasur ko laagi aru thap saajaya pani garnu parchha hai ...
Jotare Dhaiba July 10, 2009 at 4:43 PM
एकदम सही गर्नुभयो, जस्लाई तस्तै भने झैँ ।
अगुवाहरूले बाटो बिराउनाले नै समाजमा अराजकताको बीउ रोपिएर कलिला पुस्ताहरूसम्ममा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने हो । सबैले आफ्नो भूमिका र लाज मनन गरिदिएको भए आजको नेपालको यो अविगत सायदै हुन्थ्यो होला । यस्तै सानो कुरामा लुकेको हुन्छ देश र समाजको भावी दिशा ।
Milan July 21, 2009 at 8:42 AM
कडा तर सहि झटारो ... हो नि पदमा बस्न खोज्ने र सक्ने त दायित्व निर्बाह गर्नु पर्यो नि...
Jame Obama February 12, 2015 at 2:22 AM
Adams Kevin March 24, 2015 at 1:32 AM
च्यातिदिऊँ झै लाग्छ
म भित्र अझै बाचेकी छौ
दीपक जडितको साहित्य सँसार र विविध
मनको कुरा -Milan
एउटा अतिरिक्त पाटो
WWW.NIJGADH.COM.NP is comming sooon
Banyaknya Model Kebaya Modern Cantik
"भुल्न त कतै भुलेनौ"
मामे को ब्लग